ပိတ်ပင် မှုများ ဖြေလျှော့ပြီးနောက် ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ပြန်လည်မြင့်တက် လာသော နိုင်ငံများ – Let Pan Daily
ပိတ်ပင် မှုများ ဖြေလျှော့ပြီးနောက် ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ပြန်လည်မြင့်တက် လာသော နိုင်ငံများ
ကိုဗစ်-၁၉ မပျံ့နှံ့ရန် သတ်မှတ် ထားသည့် ပိတ်ပင်မှုများ ဖြေလျှော့ပြီးနောက် ကူးစက်မှု ပြန်လည်မြင့် တက်လာသော နိုင်ငံများ…
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံ အများစုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ မပျံ့နှံ့ရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် ကာလရှည်ပိတ်ပင်မှုများအနက်မှ အချို့ကို ပြန်လည်ဖွင့်ပေးပြီးနောက် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုများ ပြန်လည်မြင့် တက်လာသည်ဟု စင်ကာပူအခြေစိုက် CNA သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားသည်။
တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ နယူးဇီလန်နှင့် ဂျာမနီတို့ တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်များအတွင်း ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက် ပြန်လည်မြင့် တက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
New Zealand’s Prime Minister Jacinda Ardern addressesanews conference at Parliament in Wellington, New Zealand, on April 20. Ardern said the country will ease restrictions to allow some parts of the economy to reopen.
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ရောဂါ ပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ကနဦးအဆင့် ကျယ်ပြန့်စွာ ထိန်းချုပ်လာနိုင်သော်လည်း မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံအတွင်း ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု ပြန်တက် လာပြီးနောက် ဆိုးလ်မြို့တော်အတွင်းမှ ဘားနှင့် ကလပ်များကို ပြန်ပိတ်နေ ရပြီဖြစ်သည်။ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်း၏ မေလ ၁၀ ရက်နေ့က နိုင်ငံသို့ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းတွင် “ဒါက ပြီးတဲ့ထိကို မပြီးသေးဘူး” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့ပြီး လူအုပ်စုလိုက် ရောဂါပိုးပြန်တွေ့ရခြင်းသည် ဗိုင်းရပ်စ် မည်သည့် အချိန်မဆို များစွာ ပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်းကို ပြသနေသည်ဟုလည်း သူက ထပ်မံပြောကြား ခဲ့သည်။
ဆိုးလ်မြို့တော်တွင် စာသင်ကျောင်း များကို မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်ဖွင့်ရန်ရှိနေသော်လည်း မြို့တော် ပညာရေးကဏ္ဍကြီးကြပ်သူများက တစ်ပတ်ကြာနောက်ဆုတ်ရန် တင်ပြ ထားကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တွင်မူ ရောဂါပိုး စတင်ဖြစ်ပွားပျံ့နှံ့ခဲ့သည့် ဝူဟန်မြို့တွင် မေလ ၁၀ ရက်နေ့က ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက်မှာ တစ်လအတွင်း တွေ့ရှိ သူဦးရေထက် များနေခဲ့သည်။ ဝူဟန်မြို့ကို ပြီးခဲ့သည့် တစ်လကျော်က ပိတ်ဆို့မှုများ ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်လည်း ပိတ်ပင်မှု ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း တစ်ခုအဖြစ် မီးရထားဆက်သွယ်ရေးများစွာကို မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်ဖွင့်ခဲ့သည်။ အခြား ပိတ်ပင်မှုများကို မေလ ၁၇ ရက်တွင် ပြန်ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် ရက်များအတွင်း ရောဂါပိုးအသစ်တွေ့ရှိမှု စံချိန်တင် တက်လာခဲ့ သည်ဟုလည်း အာဏာပိုင်များက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရောဂါဒဏ်အပြင်းထန်ဆုံး ခံရသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ခုနစ်ပတ်ကြာ ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ တွေ့ရှိမှု အရေအတွက်မှာ ၇၀ သာရှိသည့် အခြေအနေသို့ ကျလာခဲ့သည်။
နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂျာဆင်ဒါ အာဒန်နှင့် သူ(မ) ၏ အစိုးရအဖွဲ့သည် ဖြေလျှော့မှုတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံ၏ ဖြေလျှော့မှုအဆင့်ထပ်ချပေးရန် ယုံကြည်မှုရစေပြီး လက်လီဆိုင်များနှင့် စားသောက် ဆိုင်များ မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်ဖွင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သတိပေးချက်များ ကျန်ရှိဆဲဖြစ်ပြီး “ကိုဗစ်က ကျွန်မတို့နဲ့ အတူရှိမနေဘူးလို့ ကျွန်မတို့ ထဲက ဘယ်သူမှ သေသေချာချာ မပြောနိုင်ပါဘူး” ဟု ဝန်ကြီးချုပ် အာဒန် က သတိပေးခဲ့သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်လည်း သားသတ်ရုံ တစ်ခုတွင် ရောဂါပိုးပျံ့နှံမှု တွေ့ရှိရပြီးနောက် အနည်းဆုံး ခရိုင်တစ်ခုလုံးကို ပိတ်ပင်မှုများ ပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့မှုနှင့်အတူ မရေရာမှုများ ဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွင်း ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများ လျှော့ပေးခဲ့သော်လည်း ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးအချက်အလတ် ကိန်းဂဏန်းများက ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုနှုန်း တစ်ဖန်ပြန် တက်လာသည်ကို ပြနေသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များ အတွင်း ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ အရေးပေါ် အခြေအနေသတ်မှတ်ချက်ကို နိုင်ငံ၏ ဒေသအများစုတွင် ယခုတစ်ပတ် အတွင်း ပယ်ဖျက်ပေးမည်ဟု အစိုးရက မေလ ၁၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပယ်ဖျက်မှုပြီးနောက် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု မြင့်တက်သည့် လက္ခဏာရပ်များ တွေ့ရှိပါက အရေးပေါ်အခြေအနေကို ပြန်လည်သတ်မှတ်မည်ဟုလည်း သတိပေး ခဲ့သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဒဏ် အပြင်းထန်ဆုံး ရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရသည့် အီရန်တွင်လည်း ပိတ်ပင်မှုများ ပြန်လည်လျှော့ချပေးခဲ့ပြီး ရက်သတ္တပတ် များစွာ လူသူကင်းမဲ့လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည့် မြို့တော် တီဟီရန်ရှိ ဈေးများနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာများတွင် ပြန်လည်စည်ကားခဲ့သည်။ သို့သော် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကီယာနူးရ် ဂျဟန်ပိုကမူ ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ပြီဟု မစဉ်းစားသင့်သေးကြောင်း သတိပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ဒေသတစ်ခုတွင် သေဆုံးမှုနှုန်း ပြန်လည်မြင့်တက် လာသည့်အတွက် ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှုများ ပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ကိုဗဈ-၁၉ မပြံ့နှံ့ရနျ သတျမှတျ ထားသညျ့ ပိတျပငျမှုမြား ဖွလြှေော့ပွီးနောကျ ကူးစကျမှု ပွနျလညျမွငျ့ တကျလာသော နိုငျငံမြား…
ကမ်ဘာတဈဝနျး နိုငျငံ အမြားစုတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ မပြံ့နှံ့ရနျ သတျမှတျခဲ့သညျ့ ကာလရှညျပိတျပငျမှုမြားအနကျမှ အခြို့ကို ပွနျလညျဖှငျ့ပေးပွီးနောကျ ရောဂါပိုးတှရှေိ့မှုမြား ပွနျလညျမွငျ့ တကျလာသညျဟု စငျကာပူအခွစေိုကျ CNA သတငျးဌာနက ဖျောပွထားသညျ။
တောငျကိုရီးယား၊ တရုတျ၊ အိန်ဒိယ၊ နယူးဇီလနျနှငျ့ ဂြာမနီတို့ တှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျမြားအတှငျး ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူအရအေတှကျ ပွနျလညျမွငျ့ တကျလာခွငျးဖွဈသညျ။
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံသညျ ရောဂါ ပိုးပြံ့နှံ့မှုကို ကနဦးအဆငျ့ ကယျြပွနျ့စှာ ထိနျးခြုပျလာနိုငျသျောလညျး မလေ ၁၁ ရကျနတှေ့ငျ နိုငျငံအတှငျး ရောဂါပိုးတှရှေိ့မှု ပွနျတကျ လာပွီးနောကျ ဆိုးလျမွို့တျောအတှငျးမှ ဘားနှငျ့ ကလပျမြားကို ပွနျပိတျနေ ရပွီဖွဈသညျ။ သမ်မတ မှနျဂအြေငျး၏ မလေ ၁၀ ရကျနကေ့ နိုငျငံသို့ ပွောကွားသညျ့ မိနျ့ခှနျးတှငျ “ဒါက ပွီးတဲ့ထိကို မပွီးသေးဘူး” ဟု ထညျ့သှငျးပွောကွား ခဲ့ပွီး လူအုပျစုလိုကျ ရောဂါပိုးပွနျတှရေ့ခွငျးသညျ ဗိုငျးရပျဈ မညျသညျ့ အခြိနျမဆို မြားစှာ ပြံ့နှံ့နိုငျကွောငျးကို ပွသနသေညျဟုလညျး သူက ထပျမံပွောကွား ခဲ့သညျ။
ဆိုးလျမွို့တျောတှငျ စာသငျကြောငျး မြားကို မလေ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ ပွနျဖှငျ့ရနျရှိနသေျောလညျး မွို့တျော ပညာရေးကဏ်ဍကွီးကွပျသူမြားက တဈပတျကွာနောကျဆုတျရနျ တငျပွ ထားကွသညျ။
တရုတျနိုငျငံ တှငျမူ ရောဂါပိုး စတငျဖွဈပှားပြံ့နှံ့ခဲ့သညျ့ ဝူဟနျမွို့တှငျ မလေ ၁၀ ရကျနကေ့ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူအရအေတှကျမှာ တဈလအတှငျး တှရှေိ့ သူဦးရထေကျ မြားနခေဲ့သညျ။ ဝူဟနျမွို့ကို ပွီးခဲ့သညျ့ တဈလကြျောက ပိတျဆို့မှုမြား ပွနျဖှငျ့ပေးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျလညျး ပိတျပငျမှု ပယျဖကျြပေးခွငျး တဈခုအဖွဈ မီးရထားဆကျသှယျရေးမြားစှာကို မလေ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ ပွနျဖှငျ့ခဲ့သညျ။ အခွား ပိတျပငျမှုမြားကို မလေ ၁၇ ရကျတှငျ ပွနျဖှငျ့ပေးမညျဖွဈသညျ။ သို့သျော ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျမြားအတှငျး ရောဂါပိုးအသဈတှရှေိ့မှု စံခြိနျတငျ တကျလာခဲ့ သညျဟုလညျး အာဏာပိုငျမြားက သတငျးထုတျပွနျထားသညျ။
ရောဂါဒဏျအပွငျးထနျဆုံး ခံရသညျ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံမြားထဲမှ တဈနိုငျငံဖွဈပွီး ခုနဈပတျကွာ ပိတျပငျကနျ့သတျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ့ နယူးဇီလနျနိုငျငံတှငျလညျး ကိုဗဈ-၁၉ တှရှေိ့မှု အရအေတှကျမှာ ၇၀ သာရှိသညျ့ အခွအေနသေို့ ကလြာခဲ့သညျ။
နယူးဇီလနျဝနျကွီးခြုပျ ဂြာဆငျဒါ အာဒနျနှငျ့ သူ(မ) ၏ အစိုးရအဖှဲ့သညျ ဖွလြှေော့မှုတဈခုအဖွဈ နိုငျငံ၏ ဖွလြှေော့မှုအဆငျ့ထပျခပြေးရနျ ယုံကွညျမှုရစပွေီး လကျလီဆိုငျမြားနှငျ့ စားသောကျ ဆိုငျမြား မလေ ၁၄ ရကျနတှေ့ငျ ပွနျဖှငျ့နိုငျမညျဖွဈသညျ။ သို့သျော သတိပေးခကျြမြား ကနျြရှိဆဲဖွဈပွီး “ကိုဗဈက ကြှနျမတို့နဲ့ အတူရှိမနဘေူးလို့ ကြှနျမတို့ထဲက ဘယျသူမှ သသေခြောခြာ မပွောနိုငျပါဘူး” ဟု ဝနျကွီးခြုပျ အာဒနျ က သတိပေးခဲ့သညျ။
ဂြာမနီနိုငျငံတှငျလညျး သားသတျရုံ တဈခုတှငျ ရောဂါပိုးပြံ့နှံမှု တှရှေိ့ရပွီးနောကျ အနညျးဆုံး ခရိုငျတဈခုလုံးကို ပိတျပငျမှုမြား ပွနျလညျခမြှတျခဲ့မှုနှငျ့အတူ မရရောမှုမြား ဆကျရှိနဆေဲဖွဈသညျ။ နိုငျငံအတှငျး ကနျ့သတျပိတျပငျမှုမြား လြှော့ပေးခဲ့သျောလညျး ဂြာမနီနိုငျငံ၏ နောကျဆုံးအခကျြအလတျ ကိနျးဂဏနျးမြားက ရောဂါပိုးပြံ့နှံ့မှုနှုနျး တဈဖနျပွနျ တကျလာသညျကို ပွနသေညျ။
ဂပြနျနိုငျငံတှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျသတ်တပတျမြား အတှငျး ရောဂါပိုးတှရှေိ့မှု ကဆြငျးလာခဲ့ပွီး နိုငျငံ၏ အရေးပျေါ အခွအေနသေတျမှတျခကျြကို နိုငျငံ၏ ဒသေအမြားစုတှငျ ယခုတဈပတျ အတှငျး ပယျဖကျြပေးမညျဟု အစိုးရက မလေ ၁၁ ရကျတှငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ သို့သျော တဈခြိနျတညျးမှာပငျ ပယျဖကျြမှုပွီးနောကျ ရောဂါပိုးတှရှေိ့မှု မွငျ့တကျသညျ့ လက်ခဏာရပျမြား တှရှေိ့ပါက အရေးပျေါအခွအေနကေို ပွနျလညျသတျမှတျမညျဟုလညျး သတိပေး ခဲ့သညျ။
အရှအေ့လယျပိုငျး နိုငျငံမြားတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ဒဏျ အပွငျးထနျဆုံး ရိုကျခတျခံခဲ့ရသညျ့ အီရနျတှငျလညျး ပိတျပငျမှုမြား ပွနျလညျလြှော့ခပြေးခဲ့ပွီး ရကျသတ်တပတျ မြားစှာ လူသူကငျးမဲ့လုနီးပါးဖွဈခဲ့သညျ့ မွို့တျော တီဟီရနျရှိ ဈေးမြားနှငျ့ ဈေးဝယျစငျတာမြားတှငျ ပွနျလညျစညျကားခဲ့သညျ။ သို့သျော ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ကီယာနူးရျ ဂဟြနျပိုကမူ ပုံမှနျအခွအေနပွေနျရောကျပွီဟု မစဉျးစားသငျ့သေးကွောငျး သတိပေးခဲ့ပွီး နိုငျငံအတှငျး ဒသေတဈခုတှငျ သဆေုံးမှုနှုနျး ပွနျလညျမွငျ့တကျ လာသညျ့အတှကျ ကနျ့သတျ ပိတျပငျမှုမြား ပွနျလညျခမြှတျခဲ့သညျ။
မြောက်ကိုရီးယား ငရဲတွင်း မှ လွတ်မြောက်နိုင် တဲ့ ခက်ခက် ခဲခဲ နည်းလမ်း (၇) သွယ်
မုန်တိုင်းပြီး လေပြေ လာသလို ကိုဗစ် အလွန် လူသား တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်နီ လာပြီ